Ungayibetha njani imvelaphi kunye neFotohop, inyathelo ngenyathelo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ungayibetha njani imvelaphi kunye neFotohop, inyathelo ngenyathelo
Lola ifani | | Izixhobo zoYilo, Photoshop, Amaqhinga
Kule post Ndiza kukufundisa indlela yokufiphaza imvelaphi yomfanekiso nge-Photoshop. Ingavuya kakhulu ukuba xa sithathe ifoto baphuma begqibelele okokuqala kwaye silawula ubunzulu bentsimi ukuze bajolise, kodwa sonke siyazi ukuba oko akusoloko kusenzeka ngamanye amaxesha asiphumeleli. iziphumo esinokuzithanda. Ke… Bhala le ngcebiso!
1 Vula umfanekiso kwaye uphinde kabini umaleko
2 Khetha isihloko, gcina ukhetho kwaye wenze imask yokubeka
3 Susa umbandela kumaleko ofipheleyo
4 Faka isicelo sokucoca ulwelo lwentsimi kunye nemiphetho echanekileyo
Vula umfanekiso uphinde ubume obuphindwe kabini
Into yokuqala esiza kuyenza yile vula umfanekiso kwi-Photoshop ukuba sifuna ukuhlela, kwaye Siza kwenza iikopi ezimbini. Ukuphinda-phinda umaleko, kuya kufuneka ucofe kuyo kwaye urhuqe ngokucinezela ukhetho (iMac) okanye isitshixo se-alt (Windows). Unako kwakhona ukuya kumaleko wethebhu> phinda maleko. Kubalulekile kwesi sifundo ukuba wazi ukuba luhlu ngalunye luqulathe ntoni, ke Siza kubiza "ungqimba olungasemva" loqobo, ikopi yokuqala ingu "blur" kunye nomxholo wokugqibela "."
Khetha isihloko, gcina ukhetho kwaye wenze imask yokubeka
Ku "maleko wesifundo" masikhethe intombazanaNdisebenzise i khetha isixhobo sesifundo, Yenza ukhetho kakuhle kwaye usebenzise isigqumathelo semaski ukuyenza igqibelele kangangoko. Ndikushiya kule khonkco a iqhinga lokwenza ukhetho olungcono. Gcina ukhetho, kuba siza kuyidinga kamva. Ukwenza oku, yiya kwithebhu yokukhetha> gcina ukhetho. Okokugqibela, ngokunqakraza kwisimboli esibonakala singqongwe kumfanekiso ongentla, siza kwenza imaski yomaleko.
Susa umbandela kumaleko ofipheleyo
Kwi «blur layer”, siya kuthi Ukukhetha umthwalo ebesigcinile kwinyathelo elingaphambili. Kuya kufuneka ukhethe ithebhu yokukhetha> ukhetho lomthwalo, kwaye luya kubonakala ngokuzenzekelayo kwiscreen. Masiyiyeke intombazana, kwaye siya kuyenza ngokuya kwithebhu yokuhlela> gcwalisa, kwiwindow eya kuvula ukukhetha "Gcwalisa ngokomxholo". Ayizukugqibelela, kodwa ungakhathazeki kuba ayizukubonwa.
Faka isicelo sokucoca ulwelo lwentsimi kunye nemiphetho echanekileyo
Siza kufaka isicelo se- isihluzo ku "blur" umaleko. Cofa kuyo, kwaye uye ku isihluzo sethebhu> ukufezekisa igalari> ukufiphala kwentsimi. Iphaneli iya kuvula apho unokuhlengahlengisa khona ukufota ngendlela othanda ngayo, unokukhetha ukufiphala kwendalo ngakumbi okanye ukufiphala okubonakalayo.
Ngaphambi kokufaka iziphumo zokugqibela, Sondeza kwaye ujonge emaphethelweni, kunokubakho umonakalo. Ukuyilungisa, yiya kwifayile ye- imaski yokukhetha kunye nebrashi, usebenzisa umhlophe ukushiya ubonakale kunye nomnyama ukugubungela, Ipeyinte kwaye ulungise loo miphetho (kwividiyo yejelo lethu leYouTube ungabona ngokweenkcukacha ukuba ungayenza njani)
Nasi isiphumo sokuphela ngamanqanaba ojoliso ahlukeneyo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Ungayibetha njani imvelaphi kunye neFotohop, inyathelo ngenyathelo